Sagag oo Geedaha u Fuushay Khudbada Gudomiyaha JWXO” sawiro dareen leh. | ogaden24
Sagag oo Geedaha u Fuushay Khudbada Gudomiyaha JWXO” sawiro dareen leh.
Wafdiga sare ee Jabhada ONLF iyo shacabka magalada Sagag ayaa waxaa u socda Kulan dadwayne oo aan loo kala Hadhin, Kulankani dadwayne oo aan waligii Noociisu Horay uga dhicin degmada Sagag ayay shacabka iyo Jabhadu kaga arinsanayaan Aayaha dhulkeena.
Madasha waxaa kahadlay Qaybaha kala duwan ee shacabka sida Culima’udiinka, Odayaasha dhaqanka, Ganacsatada, dhalinyarada iyo Hooyooyinka magalada, waxayna dhamaantood si iskumid ah u muujiyeen sida ay ula dhacsan yihiin Jabhada ONLF oo ay kuwada sifeeyeen inay tahay Rajada kaliya ee shacabka Somaaliyeed.
Sidoo kale madasha waxaa kahadlay madaxda sare ee JWXO kuwaasi oo mahad celin kadib dhankooda soo bandhigay Qorshaha ay doonayaan in lagu Hago dadka iyo dalka Ogadenia, waxayna masuuliyiinta JWXO Hoosta kaxariiqeen inaysan marna-ba katanaasulin kana Tanaasuli doonin Xaqa Aayo katashiga shacabiga Ogadenia.
Gudoomiyaha JWXO oo khudbad Taariikhi ah u jeediyay shacabka ree Sagag wuxuu sheegay inay Guul weyn tahay maanta in shacabka Ogadeenya uu si wada Jir ah u raadinayo xaqa kamaqan, taasi oo aan Horay u dhici jirin waxaanu Rajo badan kamuujiyay in Himaladii shacabka Ogadenia xiligeedii Lagaadhay.
Shacabka ayaa waxaa ka muuqda farxad aad u weyn ayaga oo taagan saacado badan Qorax ah ama cad ceed ah taasi oo aad moodo Gabi ahaan ba inaysan Karayn, waana mid muujinaysa Heerka dareenka Wadaniyadeed ee shacabkeenu Gaadhsiisan tahay xiliga lagu Jiro.